Gaamur - Wikipedia
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qodobkaan, eeg Sifeynta.
Ceel shidaal laga qoday oo ku yaala Texas, Maraykanka.
Gaamur (ingiriis: Tar) waa waa dareere jaamud ah oo ka mid ah kheyraadka dabiiciga ah, midabkiisu madoow yahay, ka samaysan isku dhisyo haydarokaarboon ah, oo laga helo oogada dhulka hoosteeda.
Gaamurku wuxuu ka mid yahay saliida dabiiciga ee dhulka, waana hadhaaga marka la sifeeyo shidaalka.
Gaamurka oo ka mid ah Shidaalka ayaa wuxuu ka samaysmay markii tiro badan oo noole dhintay ah - u badan dhir iyo algea - ku aasmeen dhagaxa sedimentary hoostiisa, halkaas oo cadaadis iyo kul badan ku helay malaayiin sano ka hor.
Marka la derso deegaanka iyo qaabdhismeedkiisa jiyooloji, ayaa shidaalka la qodaa, ka dib saliida qaydhiin la warshadeeyaa ayadoo kul badan la isticmaalayo. Waxaana soo baxa shidaalka gasoline (petrol), kerosene, Naafto, Gaaska faysnuska lagu shido, gaamur ilaa laga gaadho asphalt iyo kimikooyink kale oo laga sameeyo bacaha iyo sheyo kale.
Guud ahaan, Gaamurka waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso laamiyada.
Sababtoo ah sifooyinka biyo-xireenka, faa iidada bitumenku u leedahay dadka ayaa ka horraysay Daadka, waayo, Nuux, markii la faray inuu dhiso doonnida, waxaa loo sheegay inuu “ku daboolo gudaha iyo dibaddaba daamur.” Mar qudha dooxadii Siddiim, oo ku taal meel u dhow Sodom iyo Gomora oo ku taal aagga Badda Dhimatay, ayaa lagu tilmaamaa inay tahay “godad ku yaal godad dhoobo ah”
How did ancient shipbuilders waterproof their vessels?
A Sea of Superlatives—But Dead! /Asphalt From the Sea/
↑ Daadkii Waa Laga Badbaaday
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaamur&oldid=219999"
Last edited on 16 Oktoobar 2021, at 20:44
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:44.